Momba anay - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
Dengfeng Ltd dia orinasa tsy miankina noforonina tamin'ny taona 2009, manampahaizana manokana amin'ny famolavolana sy fanamboarana kitapo fiovam-po vonjy maika isan-karazany ao anatin'izany ny kitapo sy fitaovana LED isan-karazany.
Ny orinasa dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny vokariny amin'ny alàlan'ny mpanjifa OEM ary rehefa ilaina dia manome asa sy fitaovana hanatanterahana asa fanovana, ka hiantohana fa ny kitapo fiovam-po dia ampidirina tsara mifanaraka amin'ny fenitra eropeana, aostralia, amerika ary britanika mifanaraka amin'izany.
Miasa amin'ny mpiasa an-toerana maherin'ny 100 izahay ary mirehareha amin'ny fahafaham-po amin'ny fanaterana tena tsara. Ny ankamaroan'ny vokatray dia alefa amin'ny alàlan'ny fanaterana ny Andro Manaraka, mazàna ny kaomandy voaray alohan'ny mitataovovonana dia halefa amin'ny fandefasana ny andro manaraka, ny fotoana voatondro amin'ny vidiny fanampiny.
Ireo injenieran'ny serivisy za-draharaha Dengfeng dia manome serivisy matihanina 'an-tranonkala' matihanina. Azo antoka tanteraka ireo modely namboarina sy / na fonosana bateria natolotra.
Rehefa nifindra tany amin'ny ozinina metatra toradroa 3300 toradroa isika androany, ireo mpanjifanay dia afaka mandray soa avy amin'ny fitomboan'ny fahaiza-manao sy ny fahombiazany namboarin'ity fampiasam-bola ity.